ကျွန်ုပ်တို့အကြောင်း - Global Conveyor Supplies Company Limited
+86 0752 2621068/ +86 0752 2621123/ +86 0752 3539308
V ကြိတ်စက် ပြန်သွားပါ။
Light Duty Rollers များ
Gravity Roller မောင်းနှင်ပါ။
Conveyor rollers ထုတ်လုပ်သူ
Gravity Rollers များ
၁၉၉၅ ခုနှစ်တွင် တည်ထောင်ခဲ့သည်။
Conveyor Roller နှင့် Belt Conveyor Manufacturing ကိုအာရုံစိုက်ပါ။
GCS သည် ကျော်ကြားသော ဂုဏ်သတင်းကို နှစ်သက်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကို အရှေ့တောင် အာရှ၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်း၊ အာဖရိက၊ သြစတြေးလျ၊ ဥရောပ၊ ဟောင်ကောင်နှင့် အခြားနိုင်ငံများစွာတွင် ကမ္ဘာအနှံ့ စျေးကွက်တင်ထားပါသည်။
1995 ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့သည်;မြေဧရိယာ = 20,000㎡;ဝန်ထမ်း = လူ 120 ။ ကြိတ်စက်နှင့် သယ်ယူကိရိယာစက်မှုလုပ်ငန်းတွင် အတွေ့အကြုံ 26 နှစ် စဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်နေပါသည်။
သင်၏ သီးခြား လျှောက်လွှာလုပ်ငန်းအတွက် ခေတ်မီဆန်းသစ်သော စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်စွမ်း။ စိတ်ကြိုက်ထုတ်ကုန်များ/လိုဂို/အမှတ်တံဆိပ်/ထုပ်ပိုးခြင်း၏ OEM ကို လက်ခံပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် Global Conveyor Supply Co., Ltd (GCS) ဖြစ်သည်။
နှစ်ပေါင်းများစွာ ကျွမ်းကျင်+ စက်ရုံနှင့် ကိုယ်ပိုင်အရောင်းအဖွဲ့ အတွေ့အကြုံရှိရမည်။
လေးလံသောတာဝန် - သင်၏သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်းများကိုပံ့ပိုးရန် သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်းတွင် အသုံးချမှုများ၊သင်သည် ကျောက်မိုင်းလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သည်ဖြစ်စေ၊ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသော သတ္တုပြန်လည်ရရှိရန်အတွက် သတ္တုသန့်စင်ခြင်း၊သံမဏိစက်မှုလုပ်ငန်း၊ အပိုင်းအစများနှင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်း သန့်စင်စက်ရုံများအတွက် အမှိုက်နှင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်း။အလွန်မြင့်မားသောအသုံးပြုမှုပတ်ဝန်းကျင်လိုအပ်ချက်များ (အပူချိန်မြင့်မားခြင်း၊ ထင်ရှားသောပစ္စည်းစသည်) ပါရှိသော သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး အမျိုးအစားအမျိုးမျိုး၊ ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများ၊
Conveyor rollers, idlers, belt conveyor, drums/pulleys, roller support/frames, industrial conveying fluids, conveyor accessories, belt cleaners, HDPE rollers, conveying systems
Light Duty - Gravity rollers (အပေါ့စား rollers) များကို ကုန်ထုတ်လိုင်းများ၊ တပ်ဆင်လိုင်းများ၊ ထုပ်ပိုးမှုလိုင်းများ၊ conveyor machinery နှင့် roller conveyor များကဲ့သို့သော လုပ်ငန်းများစွာတွင် အသုံးပြုပါသည်။
အမျိုးအစားများစွာရှိပါသည်။အခမဲ့ rollers၊ ပါဝါမရှိသော rollers၊ powered rollers၊ sprocket rollers၊ spring rollers၊ internal thread rollers၊ square rollers၊ rubber coated rollers၊ PU rollers၊ rubber rollers၊ conical rollers၊ tapered rollers။Ribbed belt roller, V-belt roller.O-slot roller, belt conveyor roller, machined roller, gravity roller, PVC roller, etc.
ဖွဲ့စည်းပုံအမျိုးအစား။မောင်းနှင်မှုနည်းလမ်းအရ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ပါဝါ roller conveyor နှင့် အခမဲ့ roller conveyor ဟူ၍ ပိုင်းခြားနိုင်ပြီး၊ layout အရ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် flat floor roller conveyor၊ inclined roller conveyor နှင့် curved roller conveyor တို့ကို ပိုင်းခြားနိုင်ပြီး၊ အခြားအမျိုးအစားများကိုလည်း ဖောက်သည်များအလိုက် ဒီဇိုင်းထုတ်နိုင်သည်။ ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်အားလုံးကိုဖြည့်ဆည်းရန်လိုအပ်ချက်များ။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ကမ္ဘာ့အခြောက်အမြောက်အများထုတ်လုပ်သူများထံသို့ ကြိတ်ခွဲခြင်း၊ စစ်ဆေးခြင်း၊ သန့်ရှင်းရေးနှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဖြေရှင်းချက်များအတွက် ဒီဇိုင်းနှင့်ထုတ်လုပ်ခြင်းတွင် ပါတနာဖြစ်သည်။
Global Conveyor Supplies Company Limited (GCS) Incorporated in China 1995) သည် "GCS" နှင့် "RKM" အမှတ်တံဆိပ်များကို ပိုင်ဆိုင်ပြီး E&W Engineering SDN BHD မှ ရာနှုန်းပြည့် ပိုင်ဆိုင်ပါသည်။(၁၉၇၄ ခုနှစ်တွင် မလေးရှားနိုင်ငံ၌ စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်)။
Global Conveyor Supplies Company Limited (GCS) သည် အစုလိုက်အပြုံလိုက် သယ်ဆောင်သည့်ပစ္စည်းများ၊ အပေါ့စားစက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ဆက်မပြတ်သယ်ဆောင်သည့်ကိရိယာများအတွက် သွပ်ရည်ပြားကြိတ်စက်များ၊ ကြိတ်စက်သယ်ဆောင်ခြင်းစနစ်များ၊ အပိုပစ္စည်းများနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းကိရိယာများ ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအတွက် အမျိုးမျိုးသော idler များကို ရောင်းချခြင်းတွင် အထူးပြုပါသည်။GCS သည် အလိုအလျောက် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထုတ်လုပ်မှုကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် ၎င်း၏ ကုန်ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းများတွင် အဆင့်မြင့် နည်းပညာကို လက်ခံကျင့်သုံးသည်- အလိုအလျောက် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကြိတ်စက်လိုင်း၊ ဒရမ်လိုင်း၊ ကွင်းကွင်း- CNC စက်ကိရိယာများ၊အလိုအလျောက်ဂဟေစက်ရုပ်လက်တံ;CNC အလိုအလျောက်ပုတ်စက်;ဒေတာထိန်းချုပ်ရေးထိုးစက်;ရိုးတံအပြောင်းအလဲနဲ့လိုင်း;သတ္တုတံဆိပ်တုံးထုတ်လုပ်မှုလိုင်း။၎င်းသည် ISO9001:2015 အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်လက်မှတ်ကိုလည်း ရရှိထားသည်။ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည် 2009 ခုနှစ် အောက်တိုဘာလတွင် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၏ အရည်အသွေးကြီးကြပ်ကွပ်ကဲမှု၊ စစ်ဆေးရေးနှင့် quarantine အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှထုတ်ပေးသောစက်မှုလုပ်ငန်းလိုင်စင်ကိုရရှိခဲ့ပြီး အမျိုးသားဘေးကင်းရေးမိုင်းတွင်းထုတ်ကုန်များအသုံးပြုရန်အတွက် အတည်ပြုထားသော သတ္တုတွင်းထုတ်ကုန်ဘေးကင်းရေးလက်မှတ်ကို ရရှိခဲ့ပါသည်။ထုတ်ကုန်များကို အရိုးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ အပူစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ရေး၊ ဆိပ်ကမ်းများ၊ ဘိလပ်မြေစက်ရုံများ၊ ကျောက်မီးသွေးမိုင်းများနှင့် သတ္တုဗေဒလုပ်ငန်းများအပြင် ပေါ့ပါးသောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ သိုလှောင်မှု၊ စက်မှုလုပ်ငန်း၊ အစားအစာ၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနှင့် အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အသုံးပြုကြသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည် ဖောက်သည်များကြားတွင် နာမည်ကောင်းရပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များသည် အရှေ့တောင်အာရှ၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်း၊ သြစတြေးလျ၊ ဥရောပနှင့် အခြားနိုင်ငံများနှင့် ဒေသများစွာတွင် ရောင်းအားကောင်းပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည် "ဖောက်သည်စိတ်ကျေနပ်မှုကိုသေချာစေခြင်း" ၏ရည်ရွယ်ချက်ကိုလိုက်နာသည်။
(GCS) သည် စက်မှုလုပ်ငန်းတွင် စိတ်ကြိုက်နှင့် စံချိန်မီ ကြိတ်စက်များ အများဆုံးရွေးချယ်မှုကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။
ရှုပ်ထွေးသော ကိုးကားခြင်းနှင့် အတည်ပြုချက်ဆွဲခြင်းပရိုဂရမ်များကို အသုံးပြု၍ ရိုလာအများစုကို ချက်ချင်းကိုးကားနိုင်သည်။
လက်စွပ်များနှင့် အပေါ်ယံပစ္စည်းများကို အိမ်ရှိ Roller တွင် တပ်ဆင်ထုတ်လုပ်ထားပါသည်။
ပုံမှန်ပို့ဆောင်ချိန်များသည် ပရောဂျက်အချိန်ဇယားအများစုနှင့် ကိုက်ညီပြီး အလျင်စလိုအမှာစာများအတွက် အလျင်စလိုဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။
ပိုမိုသိရှိလိုပါကများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝဘ်ဆိုက် https://gcsconveyor.com/ သွားရောက်ကြည့်ရှုပါ။သင့်တွင်မေးခွန်းများရှိပါက၊ ကျေးဇူးပြု၍မေးပါ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
Conveyor Roller နှင့် Belt Conveyor Application Solutions များကို ပံ့ပိုးပေးရန် အာရုံစိုက်ပါ။
GCS အောင်မြင်သော ဥပမာ
ဤဗီဒီယိုသည် GCS idler ၏လျှောက်လွှာကို မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။
ကုန်ကြမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်မှုစနစ်၏ ခရီးဝေးဒီဇိုင်း၊ ထုတ်ယူမှု၏ မူလအစမှ ဆိပ်ခံတံတားသို့ ပို့ဆောင်ရန်၊ချောမွေ့သောချိတ်ဆက်မှုရရှိရန်။
ခါးပတ် conveyor idler
"Rita၊ အမြဲတမ်း မင်းရဲ့ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုက အရမ်းကောင်းတယ်။ မင်းတို့က အရမ်းကောင်းပြီး ငါတို့က conveyor idler လုပ်ဖို့ လိုအပ်ရင် မင်း ငါတို့ရဲ့ ပထမဆုံးဖုန်းခေါ်လိမ့်မယ်။"
" Roll Case Conveyor က အရမ်းကောင်းပါတယ်။ Mr. Robin က အရမ်းကောင်းပါတယ်။ သူနဲ့အလုပ်လုပ်ရတာကို နှစ်သက်ပါတယ်။ အရမ်းအဆင်ပြေပြီး စိတ်အေးအေးထားလိုက်ပါ။ Conveyor အသစ်ကို အမြန်မှာယူလိုက်ပါ၊ နောက်တစ်ခါ ကျေးဇူးပြုပြီး နည်းပညာရှင်ကို မပြောင်းပါနဲ့။ ."
လိပ်စာHongwei ရွာ၊ Xinsu မြို့၊ Huiyang ခရိုင်၊ Huizhou မြို့၊ Guangdong ပြည်နယ်
Conveyor roller ကွင်း